Ilakaka Sakaraha: 20 taona tsy nisy tombontsoa azo | NewsMada
Ilakaka Sakaraha: 20 taona tsy nisy tombontsoa azo
Antenaina hanova tanteraka ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany aty amin’ny distrikan’i Sakaraha, ny fitrandrahana vatosoa, indrindra ny safira any Ilakaka. Hatreto, tsy nitondra vokatsoa sy fampandrosoana tany an-toerana ity fihariana ity, koa andrasana ny fisian’ny biraon’ny Bam any an-toerana.
Tsy nitondra fampandrosoana mihitsy! Notokanana ny volana oktobra teo, ny Biraon’ny fikarakarana ny antontan-taratasy mikasika ny harena an-kibon’ny tany (Bam) any Sakaraha. Tsy misokatra, tsy afaka miasa izany hatramin’izao satria tsy misy ny olona afaka mampandeha sy miasa ao, araka ny fivoriana ho an’ireo mpitrandraka madinika. Atrikasa lazaina fa nanangonan-kevitra hisian’ny fifampitondrana tsara tantana eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, indrindra ny vatosoa safira aty Sakaraha. Voalaza fa hoentina hamolavolana ny paikady nasionaly ny fehin-kevitra amin’izany, hatao ny 12 desambra ho avy izao.
Raha ny zava-nisy tato anatin’ny 20 taona mahery, nitrandrahana safira taty Ilakaka Sakaraha izay, tsy nisy nanaja ny tontolo iainana, na iray aza, ny mpitrandraka madinika sy ny vaventy. Samy namela takaitra ratsy avokoa izy ireo, toy ny lavaka, ny fandripahana ny ala amin’ny fanaovana saribao sy ny aro tany.
Tsy nampidi-bola ny tao an-toerana
Eo amin’ny sosialy, maro ny tanàna vaovao niforona, nampitombo ny fifandraisana sy ny fivezivezen’ny olona sy ny vola ary ny vokatra. Nirongatra kosa ny asan-jiolahy sy ny tsy fandriampahalemana. Tsy mandeha mianatra ny ankizy fa voatery manampy ny ray aman-dreny mitady vato na asa fivelomana hafa.
Tsy nampidi-bola ny kitapom-bolam-panjakana ny fitrandrahana safira teto Sakaraha tato anatin’ny 20 taona, satria tsy nanara-dalàna ny ankamaroan’ny fitrandrahana. Tsy nandoa ny tamberim-bidy ho an’ny kaominina sy ny faritra. Saika tsy hita sy tsy fantatry ny tompon’andraikitra aty ifotony ny ankamaroan’ny vatosoa safira voatrandraka sy mivoaka aty Sakaraha. Ireo vahiny srilankey, sinoa, thailandey no tena nahazo ny volabe amina miliara sy tombontsoa mihoapampana.
Anisan’ny andraikitr’ity birao Bam vao natsangana eto Sakaraha ity ny fanarenana ireo voalaza ireo, nandanian’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena, GIZ, vola. Antenaina hitondra vokatra sy fivoarana ity fakan-kevitra natao taty an-toerana ity, hanatrarana ny tanjona fifampitondrana tsara tantana.
Vonona hanara-dalàna ny “mpihaly”
Vonona hanara-dalàna ny “mpihaly” vatosoa, midika hoe “mpihady”, ka ilaina tokony hidina ifotony ny mpiasan’ny Bam na ny solontenam-panjakana hanentana ny olona hanara-dalàna amin’ny lalam-pihariana rehetra hataony. Takina ny fangaraharahan’ny asa atao, hialana amin’ny kolikoly. Raha ny zavamisy, takin’ny rehetra ny fandraisan’ny fanjakana hanokatra io birao io ka mba ho zanaky ny faritra ny ho mpiasa ao. Ao anatin’izany ny hisian’ny sampandraharaha miandraikitra ny fifampivarotana, ahalalana ny vidiny sy ny fanambarana mazava ny vidin’ny safira, hamantarana ny tamberim-bidy tokony hiditra ao anatin’ny kitapom-bolan’ny kaominina sy ny faritra.
C MS sy Njaka A.